Imidlalo emihlanu yasimahla ye-Android yokudlala kweli hlobo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Imidlalo emi-5 yasimahla ye-Android
Ukukhethwa kwemidlalo ekhoyo ngoku kwiifowuni ze-Android kuyaqhubeka nokukhula. Uninzi lwazo lukhululekile, olulungele abasebenzisi, abangafuni ukuchitha imali ukudlala kwifowuni. Emva koko sikushiya nemidlalo yasimahla eqinisekileyo ukuba iza kuba ngumdla kuwe, ngakumbi ngoku xa kuza iiholide kwaye ujonge ukonwabisa.
Ke, unokukhuphela enye yale midlalo yasimahla kwifowuni yakho ngendlela elula kwaye kwimizuzu nje embalwa. Sikhethe imidlalo emihlanu iyonke, Esinethemba lokuba iya kuba ngumdla kuwe. Ukulungele ukudibana nabo?
Zonke izihloko esikubonisa apha ngezantsi ziyafumaneka kwiVenkile yokudlala. Ke ukukhuphela kwayo kukhuselekile ngokupheleleyo, kwaye kuya kuba lula kakhulu kuwe. Kwaye ke, ukuba ujonge imidlalo emitsha ukuze uzonwabise ngayo, olu khetho luya kuba ngaphezulu kokuhambisa.
2 UMiriyam: Ubaleke
3 Ifrostrune 2
5 I-Deadroom 2: Ukuzalwa kwakhona
Siqala ngomdlalo ukusebenza kwawo kumgaqo akunzima kakhulu. Kufuneka sidibanise amachaphaza kumanqanaba ngamanqanaba esizifumanayo ngokufanayo. Kodwa, inqanaba ngalinye lahlukile, indlela yokuzibandakanya yahlukile kwaye ubunzima bohlukile. Yiyo le nto eyenza ukuba ibe ngumdlalo owonwabisayo kakhulu. Kuba kwinqanaba ngalinye sifumana into eyahlukileyo. Imizobo yomdlalo ilungile, ukuze singadikwa nangaliphi na ixesha. Umdlalo ohlukileyo ohlukileyo, kodwa uya kuwuthanda.
Ukukhuphela lo mdlalo we-Android simahla. Ngaphakathi kwayo sifumana ukuthengwa kunye neentengiso. Ayizizo ezinyanzelekileyo zokuthenga, ke ungadlala kangangoko ufuna ngaphandle kokuchitha i-euro.
Uqhagamshelo: Isiqabu soxinzelelo
Sitshintsha ngokupheleleyo isini kumdlalo wesibini kuluhlu. Lelona bali lokuqala, apho sihamba kwihlabathi lamaphupha lentombazana egama linguMiriam. Imizobo yomdlalo ikumgangatho ophezulu, kwaye kumnyama namhlophe ngamaxesha onke. Kodwa le yinto enika umdlalo umdlalo omninzi kwaye uwenza wahluke nakwesiphi na esinye isihloko esisifumana kwiVenkile yokuDlala namhlanje. Amaphupha azele ziingozi, ke kuyakufuneka siziphephe, kuba oku, kufuneka sikhawuleze ngawo onke amaxesha. Ke umdlalo uyonwabisa kakhulu.
Ukukhuphela lo mdlalo we-Android simahla. Sineentengiso ngaphakathi komdlalo, kodwa ngethamsanqa azicaphukisi okanye zingenise. Ungadlala ngaphandle kweengxaki.
Sibuyela kumaxesha eViking kumdlalo wesithathu kuluhlu. Kule meko umdlalo uqhubeka ngonyaka we-965 eNorway. Emva kokuzika inqanawa yethu, sizifumana sisedolophini apho kwenzeka khona iziganeko ezithile ezingaqhelekanga. Umsebenzi wethu kumdlalo kukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kule dolophu incinci. Ukwenza oku, kuya kufuneka sicinge nzulu kwaye sizobe iingcinga zethu ngawo onke amaxesha. Ukongeza, kumdlalo siza kuqokelela izinto esinokuzisebenzisa ukuqhubela phambili kolu phando. Ukuba uthanda imidlalo eyimfihlakalo, ukufumanisa izinto kunye nokucinga, lukhetho olufanelekileyo. Imizobo ilungile kwaye ukuyibeka kumaxesha eViking yimpumelelo enkulu.
Ukukhuphela lo mdlalo we-Android simahla, Njengayo yonke imidlalo ekuluhlu. Ukongeza, asinazintengiso okanye ukuthengwa kwalo naluphi na uhlobo ngaphakathi.
Umthuthukisi: Imidlalo ye-Snow Cannon
Siyaqhubeka nokutshintsha uhlobo lomdlalo weqonga. Kufuneka silawule ibhola eza kujikeleza kuzo zonke iintlobo zemo. Injongo yethu, ukongeza ekuyilawuleni, kukufumana ezo zangqa ziphuma apha endleleni. Kuya kufuneka sikhawuleze ukuzifumana, kwaye sibe nobuchule. Kungenxa yokuba sihlangabezana nezithintelo ezimele ukuthintelwa ngamaxesha onke ukunqanda iingxaki. Ubunzima bonyuka ngokubonakalayo njengoko siyidlala. Ke ngumceli mngeni omkhulu.
Ukukhuphela lo mdlalo we-Android simahla. Sinokuthenga kunye nentengiso ngaphakathi kuyo. Ayizizo izinto ezinyanzelekileyo zokuthenga.
Umthuthukisi: Imidlalo emnandi
I-Deadroom 2: Ukuzalwa kwakhona
Silugqibezela uluhlu ngomdlalo ongonwabisi kuthandwa kakhulu, kodwa sisihloko esinomdla kakhulu sokukhuphela. Umsebenzi awunayo imfihlelo eninzi, Kuya kufuneka sidlule kwizikrini ngaphandle kokuba ndife kwilinge. Siza kujongana nemigibe kunye neerobhothi kwezi zikrini, ngubani oza kuzama ukusithintela ukuba singagqithisi kuzo. Inxalenye elungileyo kukuba sinokuvuselela isimilo sethu amaxesha amaninzi njengoko sifuna ukukwazi ukoyisa inqanaba.
I-Deadroom 2: Ukuzalwa kwakhona-iLebhu eMad
Umthuthukisi: Studio yeAXG
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Imidlalo emi-5 yasimahla ye-Android
Imidlalo ye-Android yeefowuni ezinkulu zesikrini